BTS Merchand & Kpop ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်နံပါတ်တစ်စတိုးဆိုင် | Kdom
သင်၏ KPOP Shopping Mall
KPOP စတိုးနှင့် BTS Merch
ကျနော်တို့ BTS Merch နှင့်အခြား Kpop အုပ်စုများကုန်သွယ်ရောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ kpop store သည်စိတ်ကြိုက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြည့်အ ၀ ရောင်းချသည်။ TheKdom တွင် BTS Merch သို့မဟုတ် Kpop Group ၏အဝတ်အစားများ၊
T-Shirt's Trending ဆိုတာဘာလဲ? အပေါ်ကကိုနှိပ်ပါ။
လှပသော KPOP ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ Comfy ဆွယ်တာအင်္ကျီ။ စျေး ၀ ယ်ရန်အထက်သို့နှိပ်ပါ။
Bangtan Boys သံမဏိအသစ်လည်ဆွဲ
Bangtan Boys V ချည်သားတီရှပ် "Shut Up"
Bangtan Boys PU သားရေပခုံးလွယ်အိတ်
ကမ်းလှမ်းသည်! DYNAMITE ကျောပိုးအိတ် 4Pcs အပြည့်အဝ Set
EXO Chanyeol ထမ်းရွက်မျက်နှာဖုံး
အခမဲ့ $ 29.99
Bangtan Boys သားရေကျောပိုးအိတ်
BIGBANG ဗုံးကြဲအကျီင်္ (၂ ခုအတွက် ၁ ခုအထူး)
နှလုံးလက်ချောင်း ဦး ထုပ်
Kpop အသင်း ၀ င်အမည်လဲမှို့မျက်နှာဖုံး
EXO Classic Logo စနီကာများ
အခမဲ့ $ 45.22
ခုနစ်ယောက်မြောက် Logo Logo ပါးစပ်မျက်နှာဖုံး
အခမဲ့! အသစ်ရောက်ရှိမှု BTS လည်ဆွဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပြောသမျှကိုကြားပါ
အကြှနျုပျ၏ BTS bangtan ယောက်ျားလေးများပန်းပွင့်ချွေးထွက်အင်္ကျီကိုသာရောက်ရှိလာသည် # photooftheday # loveyourself # beyourself #essyhair #smile # flower
giveaway အတွက် @kdom ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီနေ့စာအုပ်အိတ်ရတယ် :) ယောက်ျားတွေကသူတို့စတိုးဆိုင်ကိုသွားရှာကြတယ်။ သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းပေးတယ်။ တချို့ကမင်းဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့နိုင်ဘူး။ သင်လိုချင်ရင်လျှော့ချင်ရင်ငါ့ကုဒ် 'RAPMONYOUS' ကို Checkout မှာသုံးပါ။
ငါ၏အနွေရာသီ2016😍😍🙏🏻များအတွက် @thekdom မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်
- iana • "ì§± Asiana
ဟဲလို ကျွန်တော်နားလည်ပြီ။ ဒါဟာအရမ်းကို sooo coool ပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
- Munirah အေ
အရည်အသွေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသိတာကဒါကတရုတ်ကလာတာမင်းရဲ့အိမ်တံခါးဝကိုရောက်ဖို့နည်းနည်းကြာပေမယ့်သိပ်မကြာပါဘူး။ ငါတို့အရွယ်အစားနဲနဲသေးငယ်တာကိုသတိပြုမိတဲ့အတွက်ငါအရွယ်အစားနဲ့လိုက်ဖက်တယ်။
ဒီဂျာကင်အင်္ကျီကိုတကယ်ကြိုက်တယ် ဒါဟာစောင့်ရကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ်။ Wings ခရီးစဉ်အတွက် ၀ တ်ဆင်ရတာကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် KDom ။
အဆိုပါ GO တွင်